Nhau - Maitiro ekutenga raincoat
Iko kune kazhinji mhando ina yezvinhu zvinonaya mvura, imwe neimwe iine zvayakanakira nezvayakaipira, iyo inogona kutengwa zvinoenderana nemamiriro chaiwo. Teerera kuti usiyanise kana jira re raincoat richigadziriswa zvinhu. Izvo zvinhu zvakashandiswazve zvine hwema husina kujairika, iyo glue uye mucheka zvine simba rakasanganiswa rakasangana, iyo chena, uye ichaunyana uye ibvise panguva yekushandisa.
Kugadzirwa kwejasi remvura kunokosha zvakare. Kana kureba kwejasi rejasi kwakanyanya, kukwirira kwekusona hakuenderane, kuiswa chisimbiso hakuna kukwirisa, uye kurapwa kwekudzivirira kusabvumidzwa, kuri nyore kunyura mumvura.
Zvitaera zveRaincoat kazhinji zvinoreva refu-chimwe chidimbu chemvura inonaya, majasi akapatsanurwa uye cape raincoats (poncho), chidimbu chimwe (chakareba) chiri nyore kupfeka uye kubvisa asi chisina mvura inodzivirira, rudzi rwekupatsanurwa rwunodzivirira mvura, poncho yakakodzera bhasikoro ( mabhasikoro emagetsi, mabhasikoro) Mirira).
Kana tichitenga majasi anonaya, isu tinofanirwa kufunga zvizere kunyaradzwa uye kufema. Kana iro jasi remvura riri rekungodzivirira mvura chete, asi risingafeme, ipapo kana muviri wakanamwa kuti ufukidze muviri wemunhu, kupisa mumuviri hakugone kupera, uye kunze kunotonhorera uye mukati kunopisa, kuumba kuunganidzwa kwemvura nekunyorova iwo mupendero wejasi remvura.
Mahembe emvura anemhando dzakasiyana, saka vatengi vanorayirwa kuti vatarise tafura yesaizi kana vachitenga majasi ekunaya. Zvakanakisa kuzviedza pane. Edza kutenga makuru kuitira kuti agone kushandiswa kunyangwe iwe ukapfeka dzimwe mbatya dzechando.
Iwo wekutanga musimboti wekudzivirira mvura kuneta ndeyekumonera. Mhando dzakajairika dzekupfeka dzinosanganisira PVC (polyvinyl chloride), PU, ​​EVA, nezvimwewo Mahembe emvura ari nyore kubata zvakananga ganda. Kuti udzivise kutsamwa kweganda, EVA yakafukidzwa nemvura inonaya inokurudzirwa.
Mazuva ano, kune mavara mazhinji emajasi anonaya, uye masitayera anochinjika, kusanganisira maitiro eBritish, retro polka dot maitiro, rakasimba ruvara, ruvara, nezvimwe. Unogona kufunga nezvekupfeka collocation uye zvaunofarira kana uchitenga majasi anonaya.